ABE Qualifications - Group Diploma
Special Promotion for ABE-UK Management Diploma classes....
For Level5&6– 2,400,000 kyats for each level (regular price)
GET Discount 240,000 ks
*** အခုကောင်းမှ နောင်ကောင်းဖို့ သေချာမယ်။ ABE ဆိုရင် EVER UP မှာတက်တယ်။ ***
ပထမဦးဆုံးဘာသာစုံဂုဏ်ထူးရှင် နှင့် ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင်များ မွေးထုတ်ပေးထားသော ABE (UK) အသိအမှတ်ပြု EVER UP College (Since JUNE 2010) တွင် …..
ABE (UK Qualification) Regulated by RQF မှတိုက်ရိုက်ပေးအပ်သော …..
*** Diploma in Business Management***
2018' March Intake အတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါပြီ။
အတန်းသစ်များကို 21st March, 2018 တွင်စတင်တော့မည်ဖြစ်ပါ သည်။
ABE UK ၏ RQF စနစ်သစ်ကို EVER UP College တွင် Blended Learning System ဖြင့် သင်ကြားပေးနေပါသည်။
*** Diploma in Business Management *** Level 4
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း/IGCSE ဖြေဆိုထားသူများ၊ အောင်မြင်ထားသူများနှင့် အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများ အတွက် …. BA (Business Management) First Year နှင့် ညီမျှသော ABE (UK Qualification) Regulated by RQF မှတိုက်ရိုက်ပေးအပ်သော …..
*** Diploma in Business Management *** Level4(1 Year Duration)
1) Dynamic Business Environments (Exam)
2) Enterprising Organizations (Exam)
3) Finance for Managers (Exam)
4) Employability & Self Development (Assignment)
5) Project Management (Exam)
6) Introduction to Quantitative Methods (Exam)
7) Introduction to Entrepreneurship (Assignment)
8)Dynamic Collaborative Teams (Assignment)
ABE Level4Diploma အောင်မြင်ပြီးသူများသည် Level 5,6 and Bachelor အပြင် MBA ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
*** Diploma in Business Management *** Level 5
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူများ (For Day & Distance University Students) အတွက် ABE (UK Qualification) Regulated by RQF မှတိုက်ရိုက်ပေးအပ်သည့် စီးပွါးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာများရယူနိုင်ပါပြီ ... ကျောင်းဆက်တက်လိုသူများ (for Further studies) နှင့် International Organization ကြီးများ နှင့် INGO ၊ သံရုံး များအစရှိသော လုပ်ငန်းခွင်ဝင်များသို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် နိုင်ရန်များစွာအထောက်အပံ့ပေးသော UK အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ ABE diploma holders များသည်လည်း International Company ကြီးများတွင် ရထူးမြင့်၊ လစာမြင့် များဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိနေပါသည်။
BA (Business Management) Second Year နှင့် ညီမျှသော ABE (UK Qualification) Regulated by RQF မှတိုက်ရိုက်ပေးအပ်သော …..
6 subjects (3Exam Subjects +3Assignment Subjects)
1) Innovation & Business Performance (Exam)
2) Effective Financial Management (Exam)
3) International Business Economic & Markets (Exam)
4) Managing Agile Organizations & People (Assignment)
5) Analytical Decision-making (Assignment)
6) Managing Stakeholders Relationship (Assignment)
*** Diploma in Business Management*** (Level 6)
MBA ဘွဲ့ ဆက်လက်ရယူလိုသူများ ၊ လုပ်သက်ရှိဝန်ထမ်းများ (ရာထူးတိုးရန်)၊ ဘွဲ့ရများ ၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြောင်းလိုသော အရာရှိကြီးများ နှင့် International Company ကြီးများတွင် အလုပ်ဝင်လိုသူများ အတွက်များစွာအထောက်အပံ့ပေးသော UK အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ ABE diploma holders များသည်လည်း International Company ကြီးများတွင် ရထူးမြင့်၊ လစာမြင့် များဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိနေပါသည်။
BA (Business Management) Final Year နှင့် ညီမျှသော ABE (UK Qualification) Regulated by RQF မှတိုက်ရိုက်ပေးအပ်သော …..
1) Business Strategy & Decision-Making (Exam)
2) Developing International Markets (Exam)
3) Business Ethics & Sustainability (Exam)
4) Leading Strategic Change (Assignment)
5) Corporate Finance (Assignment)
6) Strategic Stakeholder Relationships (Assignment)
သင်တန်းများအားလုံးကို EVER UP College မှ Ph.D, Master ဘွဲ့များရရှိထားသော ABE သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံရှိ ဝါရင့်ဆရာ၊ ဆရာမများမှ ဦးဆောင်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
EVER UP College's Success and Achievement History (Since June 2010)
1. ပထမဦးဆုံး ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးရှင် (Outstanding Achiever Award)
- ဒေါက်တာ မီမီမောင်မောင် (December 2012 Examination Session – ABE UK QCF Level 6)
2. ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင် (Top Paper Prize)
- မရီမာအောင် - EPP (June 2013 Examination Session – ABE UK QCF Level 6)
3. ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင် (Top Paper Prize)
-မအိမ့်မြတ်သဉ္ဇာ - BBM (December 2013 Examination Session – ABE UK QCF Level 5)
4. ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင် (Top Paper Prize)
- မမိုးသင်းချို - Medical Student (December 2014 Examination Session – ABE UK QCF Level 5)
5. ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင် (Top Paper Prize)
- မသွယ်နော်ဇာဇော် - Medical Student (June 2017 Examination Session – ABE UK QCF Level 6)
6. Higher Achiever Award
- မငြိမ်းမြတ်သူ -BBM (End to End Planning Manager – Unilever Myanmar)
(December 2012 Examination Session – ABE UK QCF Level 6)
7. Higher Achiever Award
- ဒေါက်တာ သက်နှင်းသူဇာ (December 2012 Examination Session – ABE UK QCF Level 6)
Copyright © 2020 Ever UP College. All Rights Reserved. Developed by DMYANMAR